२ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृ त्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त…. – Dainik Sangalo
२ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृ त्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त….
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०७, २०७८ समय: १४:०६:१५
इन्स्टाग्राम साथीहरूले आफ्नै साथीको ज्या’न लि’एको घटना बाहिर आएको छ। ड’रला’ग्दो कुरा के छ भने उनीहरुको ज्या ‘न लि’ने दुई जना केटा १० कक्षाका विद्यार्थी हुन् । प्रहरीले दुवै अभियुक्तलाई नि’यन्त्र’ण’मा लिएर सोधपुछमा धेरै च’कित पार्ने खुलासा गरेको छ । अहिले प्रहरीले यस विषयमा सम्पूर्ण अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
वास्तवमा, कलेजका २० वर्षीय विद्यार्थी प्रेमकुमारलाई रे’डहि’ल्स नजिकै एउटा स’मुह’ले घटना घटाएको थियो। प्रेमकुमारमाथि ह’ म’ला भ’एको देखेर उनका साथीले घटनास्थलबाट भा’ गे’र अभिभावकलाई खबर गरेका थिए । यस घटनामा प्रेमकुमारको मृ त्यु भएको थियो । त्यसपछि प्रेमकुमारका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन थालेपछि यो घटनाको पछाडि कक्षा १० का दुई विद्यार्थी देखेर छक्क परे । ती दुईले बताए अनुसार प्रेमकुमारले धेरै केटीहरूसँग मित्रता बनाएका थिए र उनीहरूका नराम्रो त’स्वि’र खि’चेका थिए। त्यसपछि उनले ती तस्बिरहरू प्रयोग गरेर केटीहरूसंग पैसा मा’ग्न थाले।
प्रेमकुमारलाई करिब डेढ लाख रुपैयाँ दिएको तर उनी पटक–पटक माग गर्दै आएको युवतीको दाबी छ । त्यसपछि केटीहरूले अर्को केटाको मद्दत लिए जससँग तिनीहरू इन्स्टाग्राम मार्फत साथी भए। त्यसपछि केटी र केटाले यो’जना बनाए।
जब प्रेमकुमारले कथित रूपमा थप पैसा मा’गेका थिए, केटीहरूले उनलाई रे’डहि’ल्सको एकान्त ठाउँमा आउन भने। प्रेमकुमार आइपुग्ने बित्तिकै उ’क्त स’मु’हले उनलाई घे’रा हा’ ‘ल्यो र उसले केहि बुझ्नु अघि नै प्रेमकुमारलाई आ’ क्र’ म’ ण ग’र्न था’ल्यो। उनीसँगै गएका उनका साथी भा’ गे’र आमाबुवालाई खबर गरेका थिए ।
यसैबीच स;मु;हले प्रेमकुमारको ह’ ‘त्या गरी खाली ज’ग्गा’मा गा’ ‘डे । प्रहरीले युवतीमार्फत अ’परा’धी’लाई ट्रे’स गरी अ’परा’ध स्थ’लमा ल’गेर प्रेमकुमारको श’व ब’रा’म’द गरेको थियो । थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
Last Updated on: December 22nd, 2021 at 2:06 pm